Tantara · Septambra, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Tantara · Septambra, 2009
Tantara mikasika ny Tantara tamin'ny Septambra, 2009
Amerika Avaratra28 Septambra 2009
Fitantanam-pitondrana28 Septambra 2009
Nanamarika ny fitsingerenan'ny fahatelo taonan'ny fanonganam-panjakana ny 19 Septambra lasa teo izay nanery ny praiministra Thaksin Shinawatra hiala sy ho any an-tsesitany amin'izao fotoana izao. Mahatsiaro io fitsingerenan'ny taonan'ny fanonganana io koa ireo mpampiasa bilaogy.
Azia Afovoany sy Kaokazy17 Septambra 2009
Hafatra roa mitovy no nisy nandefa tao amin'ny tontolon'ny blaogy Kazakh avy amin'ny lafintany roan'ny firenena. Samy miresaka momba ny fitsanganana tamin'ny matin'ny sary famantarana vanimpotoana iray taloha tany izy roa: ny loha sy ny sandrin'ny tsangambaton'i Lenin.
Bangladesh: Misaona ny loholona namana, Edward Kennedy
Amerika Avaratra05 Septambra 2009
Senator Edward Moore “Ted” Kennedy (22 febroary 1932 – 25 aogositra 2009), mpikambana faharoa zokiny indrindra ao amin'ny loholona amerikana, dia matin'ny homamiadana ny talata lasa teo. Mitomany ity olo-malazan'ny politika ity daholo i Etazonia sy izao tontolo izao noho ny asany manohana ireo olona manana olana, ireo mpitsoam-ponenana Bengalais...